लेख/बिचार – Page5– nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
प्रचण्डको परिवारमोह र पैसाको राजनीतिले देश बन्दैन
-अनिल शर्मा विरही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०५७ को दोस्रोे राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डपथ पारित गर्दै मेरो व्यक्तित्व, निजत्व सबै पार्टी र समूहमा विलय भयो भनेका थिए तर समयले त्यो भनाइलाई पुष्टि गरेन । बरु एउटा शाह राजाको स्थानमा थुप्रै >>>
कुलमानलाई कोरियाबाट पत्र :अादेश देउ कुलमान ! कपुतहरुकाे शिर छेदन गर्न तयार छौँ
कुलमान सर नमस्कार ! तपाईकाे अाँशुले हामीलाई पिराेलेकाे छ। तपाईकाे अाँखामा अाशु हैन सर सिङ्गाे देशकाे उज्यालाे सुहाँउछ। तपाईं जस्ताे सपुतले राेएर कमजाेर हुने बेला हैन सर, मनमा देश बाेकेर दृढताका साथ अघि बढिरहनुस् ,हामी सारा नेपाली तपाईकाे साथमा छाै। >>>
May 10, 2017 Mohan Rai 0
-गोबिन्द छन्त्याल नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय÷जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज >>>
कुलमान घिसिङ र महावीर पुनलाई आँखाको कसिङ्गार नै बनाए
-हेम चन्द्र राई नेपाल एउटा सामाजिक भौगोलिक परिचयमा विविधतता भएको मुलुक हो । धार्मिक , सामाजिक , आर्थिक हिसाबले यहाँ सबै मानिस एकै किसिमका नागरिक हैसियत बोकेका व्यक्तिहरु पक्कै छैनौं । समाजमा धेरै किसिमका मानिस बसोबास गर्दछन । कसै >>>
May 9, 2017 Mohan Rai 0
-जीवन मंगोल पहिलो पटक राष्ट्रिय गायन प्रतिस्प्रधा “नेपाल आइडल” नामक कार्यक्रमको पाँचौ इपिसोड सम्पन्न भइसकेको छ । एपी वान टेलिजिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम युट्युव मार्फत पनि हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कार्यक्रमको सुरुवाती संस्करणमै यत्र तत्र सर्वत्र विवादमा परेको >>>
चुनावको मतपत्र यसरी सरल बनाउने की ? विश्वास दीप तिगेला
चुनाव हार्नुमा जनताको समर्थन भएन भनेर चित्त बुझाउने चलन छ तर धेरैलाई थाह छैन चुनाव के–के कुराले हारिन्छ भन्ने । आफ्नै उम्मेदवार छोरालाई आमाले भोट गल्ती ठाँउमा हालेको र आफ्नै कार्यकर्ताले पनि गलत चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने गरेको घट्ना अत्याधिक >>>
संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन र घोषित निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरू: राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन र घोषित निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरू: २०७२ असोज ४ गते वर्तमान संविधान जारी भएदेखि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनबिच भएका सहमति सबैको सरोकारको विषय भएको छ । पटक पटक सहमति >>>
सङ्घवादका सिद्धान्तहरूको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको संविधानका केही पक्षहरू -राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
१. विषय प्रवेश नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रचार गर्न यसका वाहकहरू थाकेका छैनन् । तर अहिले सम्म यसको सङ्क्रमणकालिन धाराहरू बाहेक यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वस्तुगत परिस्थिति देशमा विद्यमान छैन । वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका >>>